Ngokukhawuleza ukutshintsha kwentwasahlobo kuya kuphela, kuya kuba neentsuku ezifudumeleyo. Abantwana baya kuchitha ixesha elininzi kwisitalato, kwaye ekubeni banomdla kwimidlalo yangaphandle, abazali abaninzi bacinga ukuthenga ibhasikidi. Le ndlela yindlela yokuphuhlisa ukuhambelana nokuhamba, ukuqhelaniswa kwendawo kunye nezinye izakhono ezincedo. Kodwa ungathini ukuba ungadideki kwisethi yeziphakamiso, indlela yokukhetha ibhasikidi ephakamileyo ephezulu eya kukhonza umntwana ngaphezu konyaka?
Into yokuqala kufuneka uyibeke ingqalelo kumntwana wakho. Ingaba ihambelana nexesha apho abantwana banokufundiswa ukukhwela ibhasikidi? Ukuba umntwana uneminyaka engaphantsi kweminyaka emithathu ubudala, ukuba uhamba ngokungaqiniseki, kungcono ukuba uhlehlise ukuthenga kuze kufike ixesha elizayo. Ukuba ucinga ukuba uya kuhlangabezana nayo, ngoko kufuneka ukhethe ibhasikidi: omncinci umntwana, kulula ukuba yi-bhasiki. I-tricycle yokuqala, ngoko ibhasikidi enevili ezine ezikhutshweyo, kwaye kuphela emva kwebhayisekile epheleleyo. Ngokusetyenziswa ngokucophelela, iibhayisikili ezincinane zingaphila iminyaka emihlanu okanye ngaphezulu, ukusuka ekuqaleni umntwana wakho uya kukhula ngokukhawuleza kunokuba uya kuba nexesha lokuphula.
Umncinane umntwana, kulula ukuba yi-bhasiki. Ingane iya kufuneka ihambe yodwa, idlulise ukusuka kwindawo ukuya endaweni, umzekelo, ngokusebenzisa izithintelo. Ngoko ke, i-bhasiki akufanele ibe nzima.
Kubaluleke kakhulu ukuba umntwana ukhululekile ukuhlala kwibhayisikili. Ngako oko, isihlalo ngokwaso kufuneka sibe ngumbumba okanye senziwe ngokufaka i-rubber, ngaphandle koko umntwana uya kuguqa aze awele, engazange afunde ukuhamba. Ngamanye amaxesha iibhayisikile zixhotyiswe ngamabhanti okuhlala. Isihlalo esihle sinamanqanaba amaninzi okulungiswa - inokuphakanyiswa iphinde iyancitshiswe, kuxhomekeke ekukhuleni komntwana, oku kuvumela enye ibhayisiki ukuba ihlale ixesha elide, njengoko "ikhula" nosana.
Awukwazi ukuhamba kude ngaphandle kwesigxina. Ivili elihambayo lebhayisiki elungileyo lilula, kulula ukujika, izibambo zalo ziqulethe ukufakwa kweerubha ukwenzela ukuba izandla zentsana zingaboni. Ivili elikhoyo lale bhasikiyo lihlala lixhotyiswe ngezixhobo ezahlukeneyo - ukusuka kwi-freake ukuya kwisikhetho se-speed. Konke oku kufuneka kusebenze ngokuthembekileyo. Ivili lokuqhuba likwazi nokuba liphezulu okanye liphantsi, kuxhomekeke ekukhuleni komntwana.
Iibhasikidi zanamhlanje zineenkcukacha ezahlukeneyo ezenza ukuba zihambe kakuhle. Izibuko zelanga kunye nezixhobo ezifanelekileyo, kunye nezibophelelo zebhotile yamanzi. Ibhayisikile kufuneka ibe neenqwelomoya ezibonakalayo ezibonakalayo ukwenzela ukuba umntwana abonakaliswe ngokucacileyo endleleni nakumnyama. Kwincinci encinci, kukho iibhayisikili kunye neepaneli zomculo kunye neendlela ezifanelekileyo zokulawula, apho abazali baqoqa abantwana nantoni na.
Ubukhulu kunye nomgangatho weevili zigqiba indlela ukhululekile ngayo umntwana wakho. Kubaqalayo, abakhweli abancinci abancinci abadluli kwi-30cm. ububanzi. Kubafundi besikolo bavelisa iibhayisikili ngamavili kunye nobubanzi obungama-40 cm ububanzi, kunye nabaselula - 55 nangaphezulu. Kubalulekile. Yintoni umgangatho weevili kumagumbi, ngaba unokusebenzisa umpompo ukuba ivili likhutshwe.
Ibhayisiki yindlela enhle yokuzonwabisa umntwana lonke ihlobo, mfundise izakhono ezintsha kwaye ubonise indawo ezintsha apho ungazange ube khona ngaphambili. Khetha ibhayisikili elungileyo alikho nzima, kufuneka uqwalasele iimfuno zangempela zentsana, umlinganiselo wobungakanani kunye nexabiso, kwaye, ngokuqinisekileyo, ukhetho lwakho, kunye nokukhethwa kwemilo kunye nemibala inkulu ngokwaneleyo ukukholisa kwanomthengi onzima kakhulu.
Ukuba umntwana uyamoyika abantu abangaziwayo endlwini
Indlela efanelekileyo yokwenza intombi yam?
Amathoyizi kubantwana ukusuka komnye ukuya kwiminyaka emithathu ubudala
Burrito kunye nenkukhu kunye nepepper
Ama-sandwich ngeoli ye-basil
Ukuhlolwa kweDNA kubonisa intombi engekho mthethweni kaVadim Kazachenko
Ukunyusa ukulahlekelwa nokuhlanjululwa komzimba
Iimpazamo eziqhelekileyo ekufumaneni umsebenzi
Indlela yokuthenga into elungileyo kwaye wenze ngaphandle kwenkcitho engadingekanga: 5 iimfihlelo zokuthenga nge-smart
Uvuyisana kakhulu ngentlokoma yomntu kwivesi kunye neprose